Fadeexo:Madaxweynaha Cusub ee Mareykanka Donald Trump Oo La Seexday habeenka guusha xaaska Xidig ka tirsan manchester United - iftineducation.com
Fadeexo:Madaxweynaha Cusub ee Mareykanka Donald Trump Oo La Seexday habeenka guusha xaaska Xidig ka tirsan manchester United
iftineducation.com – Ninka Dhawaan loo doortay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Bastian Schweinsteiger naagtiisii Ana Ivanovic ay tahay naagtii ugu quruxda badneyd abid ee uu arkay.
Trump, oo 70 jir ah, ayaa saddex sano ka hor mar uu la kulmayay ra’iisul-wasaaraha ee Serbia Ivica Dacic, arkay gabadhaan teniska caanka ku ah.
Waxa uu sheegay in Ivanovic tahay naatga ugu quruxda badan, waxaan ku arkay noloshayda si fudud, laakiin waxaan u qiray in at tahay qofka dumarka ugu quruxda badan..”
Trump ayaa loo doortay inuu noqdo Madaxweynihii 45aad ee Mareykanka aroortii Arbacada shalay. Ivanovic, oo 29 jir ah, waxaa guursaday ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Schweinsteiger oo 32 jir ah, inkastoo uu la kulmay Trump sanadkii 2014 markaasoo sawir ay wada galeen. Waqtigaas waxa saxaafada ay ku eedeysay Trump inuu la seexday xitaa badhaan caanka ah, inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin sheekadaas